Na-enye onye na-ahụ maka mmiri mmiri, Long Life Span Led Driver, 48V Led Driver from China Supplier
Nkọwa:Ọkwọ ụgbọala na-adịghị mmiri,Ogologo Ndụ Ogologo Ndụ,48V Onye ọkwọ ụgbọala,na-eduzi ọkwọ ụgbọala oge niile,ọkwọ ụgbọala nke na-eduzi ìhè,
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-aga n&#39;ihu ugbu a > IP67 Aluminom Case Led Driver
Ngwaahịa nke IP67 Aluminom Case Led Driver , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọkwọ ụgbọala na-adịghị mmiri , Ogologo Ndụ Ogologo Ndụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of 48V Onye ọkwọ ụgbọala R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Kọmputa Elected Driver IP67 n'ihi na Ọpụpụ n'èzí  Kpọtụrụ ugbu a
347VAC LED Driver 150W Nyere Ike Supply IP67  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye Ike Ike Wallpack Small 50W  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-akwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala nke 100W dịka 100W.  Kpọtụrụ ugbu a
Ugbu a Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu n'èzí  Kpọtụrụ ugbu a
Onye Ọkwọ ụgbọala na-adị ugbu a 700ma  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V Dimmable LED Light Driver IP67  Kpọtụrụ ugbu a
Nyefe Ngbanwe Ike Nhọrọ 36W  Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri ọkwọ ụgbọala nke mmiri mmiri.  Kpọtụrụ ugbu a
Ọdịdị Aluminom Waterproof LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
100W 24V Waterproof IP67 LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
100W Nrụpụta Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ IP67 Ikike Ike Ike  Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu Volta Waterproof LED Street Driver 160W  Kpọtụrụ ugbu a
Waterproof Aluminom Led Driver AC100-277V  Kpọtụrụ ugbu a
Aluminom Diana Street okporo ọkụ Ike Supply DC  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkwọ ụgbọala a na-ere n'ahịa  Kpọtụrụ ugbu a
Ike Ike Ngwá Ike Ike 100W arụmọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmputa Elected Driver IP67 n'ihi na Ọpụpụ n'èzí
Nkwakọ ngwaahịa: 60PCS / CARTON
Egwuregwu Electronic Led Driver IP67 maka Ọpụpụ n'èzí Nkọwapụta ngwaahịa Product Name Waterproof Electronic Led Driver Item
347VAC LED Driver 150W Nyere Ike Supply IP67
Nkwakọ ngwaahịa: 24PCS / CARTON
Nkọwapụta ngwaahịa Njirimara Ngwaahịa Nkwepụta nke otu onye, ​​mmepụta ọkwa ugbu a na-ahọrọ site na DIP SW Kwado mgbaàmà na-agbanwe agbanwe analogụ 0-10V, Ntughari ma ọ bụ mgbaàmà ọrụ. Voltage ọsọ ọsọ nke 100VAC ~ 277VAC Nnukwu arụmọrụ ruru 93% Wuru...
Ngwunye Ike Ike Wallpack Small 50W
Nkọwa: FD-55H-xxxB Series na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Ndị a nkeji ga-enye aka 1.3A nke mmepụta ugbu a na kacha mmepụta voltaji nke 54 V maka 55 W kacha mmepụta ike. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha. Ụdị...
Onye na-akwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala nke 100W dịka 100W.
Nkwakọ ngwaahịa: 18PCS / CARTON
Nkọwa: FD-100HxxxB na-arụ ọrụ site na ntinye ọsọ ọsọ 90 ~ 305 Vac. Nkeji a ga-enye aka 2.4A nke mmepụta nke ugbu a na ihe kachasị voltage nke 54 V maka 100 W oke mmepụta ike. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha. Ụdị njirimara...
Ugbu a Ọkwọ ụgbọala na-aga n'ihu n'èzí
Onye ọkwọ ụgbọala eletriki 12V enweghi ike ikpuchi Aluminom nke nwere ọhụụ na-enwe mgbe ọ bụla nwere ike ịhọrọ ọkwa dị iche iche, ya na voltage input site na 100-277 V na mmepụta nke 700 mA. Ọ na-echebe nchekwa gị site na n'elu okpomọkụ ma...
Onye Ọkwọ ụgbọala na-adị ugbu a 700ma
Onye ọkwọ ụgbọ ala 300ma nke nwere ike ịchọta Aluminom nwere ike ịchọta ọkwa dị iche iche, ya na voltage ọsọ ọsọ site na 100-277 V na ọkwa mmepụta nke 700 mA. Ọ na-echebe nchekwa gị site na n'elu okpomọkụ ma na-enye nchebe dị elu ruo 4 kV (LN) /...
Nkọwa: FD-160HH-xx Series na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Nkeji a ga-enye 4.2A nke mmepụta ihe ugbu a na volt voltage kachasị elu nke 143 V maka ike mmepụta kachasi 160 W. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha....
Nyefe Ngbanwe Ike Nhọrọ 36W
Aluminium akpịrị Ọkụ na-adị ugbu a ọkwọ ụgbọ ala nwere nhọrọ iji kwekọọ n'ụdị nchegharị, na volta ọsọ ọsọ site na 100-277 V na mmepụta ugbu a nke 700 mA. Ọ na-echebe nchekwa gị site na n'elu okpomọkụ ma na-enye nchebe dị elu ruo 4 kV (LN) /...
Mmiri ọkwọ ụgbọala nke mmiri mmiri.
Nkwakọ ngwaahịa: 20PCS / CARTON
Njirimara IP67 Waterproof. -UL na CUL edepụtara maka ebe mmiri -Ndị na-arụ ọrụ nke ọma na-anwụ anwụ Ikepụta ike Max 55W. Ebube ugbu a. 3 na 1 ọnọdụ dimming: 0-10V, PWM, RX. N'ihe dị nro (0-100%), nwere ike ịda mbà. TUV CB CE UL FCC akwụkwọ....
Ọdịdị Aluminom Waterproof LED Driver
Njirimara IP67 -UL na CUL edepụtara maka ebe mmiri -Ndị na-arụ ọrụ nke ọma na-anwụ anwụ Ikepụta ikike Max 36W. Ebube ugbu a. 3 na 1 ọnọdụ dimming: 0-10V, PWM, RX. N'ihe dị nro (0-100%), nwere ike ịda mbà. TUV CB CE UL FCC akwụkwọ. NKWUKWU:...
100W 24V Waterproof IP67 LED Driver Atụmatụ na Uru · PFC dị elu - 24V LED Driver 100W • Ọpụpụ otu ọwa, mmepụta ọkwa ugbu a
100W Nrụpụta Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ IP67 Ikike Ike Ike
Nkọwa: Usoro FD-100H-xxx na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 90 ~ 305 Vac. Ngalaba ndị a ga-enye ihe ruru 3.3A nke mmepụta ihe ugbu a na nnukwu voltage voltage nke 286 V maka 100 W oke mmepụta ike. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere...
Nnukwu Volta Waterproof LED Street Driver 160W
Nnukwu Volta Waterproof LED Street Driver 160W Gwa Ọkwọ ụgbọala na-adọkpụ LED Street 160W FD-160H-054B Ọkwọ ụgbọala nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, bụ Ọkwọ ụgbọala na-arụkwa ụgbọala (Ụlọ Aluminom) nke e
Waterproof Aluminom Led Driver AC100-277V
Nkọwa FD-80H, ọkwọ ụgbọ ala nke Aluminom, emere maka iduzi okporo ámá n'okporo ámá , duzie ngwa ngwa Floodlights, iji rụọ ọrụ General Outdoor Lighting Solutions. Flickr na-aga n'ihu ugbu a n'efu 0-10V / PWM / RX dimming, ya na ikuku...
Aluminom Diana Street okporo ọkụ Ike Supply DC
Nkọwa FD-160H, Ọkwọ ụgbọ ala nke ala alumini, emere maka iduzi okporo ámá n'okporo ámá , duzie ngwa ngwa Floodlights, iji rụọ ọrụ General Outdoor Lighting Solutions. Flickr na-aga n'ihu ugbu a n'efu 0-10V / PWM / RX dimming, ya na ikuku...
Ọkwọ ụgbọala a na-ere n'ahịa
Ike Ike Ngwá Ike Ike 100W arụmọrụ
Nkọwa: FD-100H-54xx na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 100-277 Vac. Ejiri oghere Ndị nke a ga-enye ihe ruru 3.3A nke mmepụta ihe ugbu a na oke voltage voltage nke 286 V maka 100 W kachasị ike. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na...
China IP67 Aluminom Case Led Driver Ngwa
Ihe dị iche iche nke IP Rated / Waterproof AC / DC ogologo oge ndụ duziri ọkwọ ụgbọala nke kwesịrị ekwesị maka ojiji dị iche iche nke ngwa ngwa ọkụ, gụnyere ìhè Street, Architectural Lighting, Task Lighting, Lighting Light, Light Transportation, Entertainment Lighting, Ngosipụta njem, Nchekwa & Udo Nchedo na Uzo Ochie. LED ọkụ ọkụ ike ọnọde & LED ọkwọ ụgbọala na mgbe niile voltaji ma ọ bụ mgbe niile ugbu a ụdị IP67 e gosiri. ọkwọ ụgbọala na-adịghị mmiri, ọkwọ ụgbọ ala 48V.
Uru : Ike dị elu na-eduzi ọkwọ ụgbọ ala, nchebe na nkwụsi ike, nchebe nrụgide dị elu, nchedo eletriki dị mkpirikpi, mgbochi ọkụ siri ike, akwụkwọ nrịbama dị mma, UL TUV FCC, wdg.
Nbanye ovltage: 100-277V
Volta mmepụta (dị iche iche): 24-38V / 30-42V / 36-54V / 45-76V / 72-143V
Ugbu a: 100-5000mA
Ihe kpatara ike:> 0.95
Kedu uru ọ dị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị na Faar?
Ihe ngwọta dị irè maka ụlọ ọrụ, azụmahịa na ngwa ndị ọzọ
Onyonyo nke oma na ngwa ise nke ise, EMC, EMI, nchekwa SELV
Ọkwọ ụgbọala na-adịghị mmiri Ogologo Ndụ Ogologo Ndụ 48V Onye ọkwọ ụgbọala na-eduzi ọkwọ ụgbọala oge niile ọkwọ ụgbọala nke na-eduzi ìhè Ọkwọ ụgbọala eletrik na-adịghị mmiri Ọkwọ ụgbọala na-adịghị mmiri mmiri 36W